Ho tafiditra ao ny ho avy Microsoft | Martech Zone
Ho tafiditra ao amin'ny ho avy i Microsoft
Alakamisy Oktobra Oktobra 20, 2011 Alakamisy Oktobra Oktobra 20, 2011 Douglas Karr
Tsy dia miresaka momba an'i Microsoft aho amin'ny Martech Zone. Tena tsy azo ekena izany satria efa manana dian-tongotra lehibe ity orinasa ity. Rehefa miresaka amin'ny COO an'ny LiquidSpace, Doug Marinaro, ary tamin'ny herinandro lasa teo niresaka tamin'ny Josh Waldo, Microsoft dia tena manao hetsika tsy mampino amin'ny fametrahana fototra amin'ny tompona orinasa kely. Ity fampiasam-bola ity eo am-piandohan'ny fiainan'ny orinasa dia iray izay handoa be an'i Microsoft amin'ny ho avy.
Josh Waldo dia talen'ny varotra SMB (orinasa madinidinika sy salantsalany) Mpiara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny vahaolana amin'ny mpanjifa sy vahaolana (Izy no talen'ny Senior Markets vaovao sy fantsona mivoatra ao amin'ny Microsoft). Nizara nomerao vitsivitsy tamiko i Josh izay nanaitra ahy… Nandany $ 9.5 Miliara (tamin'ny B) iray an'ny Microsoft amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana izy izao. Ny tena manaitra aza dia ny 70 ka hatramin'ny 90% -n'io teti-bola io dia hifantoka amin'ny rahona! Wow.
Ohatra iray amin'ny fomba fiasan'ny Microsoft amin'ny SMBs BizSpark.
Mba hanampiana ireo fanombohana teknolojia ambaratonga voalohany hahomby amin'ny alàlan'ny rindrambaiko Microsoft, BizSpark dia manome alàlana hiditra amin'ny vondron'olona mpiara-miasa manerantany - izy rehetra tafiditra amin'ny fanohanana ny fanavaozana ateraky ny lozisialy sy ireo mpandraharaha teknolojia manaraka.
Mahagaga ny sasany amin'ireo orinasa mpiara-miasa:
Xero rindrambaiko fitantanana kaonty, faktiora ary banky
Humidité - toerana hamoronana profil fanombohana ary hifandraisana amin'ireo mpampiasa vola 35,000.
Mopapp - fampiharana hanarahana ny varotra manerana ny tsena finday rehetra.
LawPivot - loharanom-baovao ara-dalàna ho an'ny orinasa.
oDesk - tranonkala iray hifandraisana amin'ny loharanom-pahalalana momba ny mpiasa lavitra na inona na inona manomboka amin'ny fampandrosoana hatramin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Tsy lazaina intsony ireo fikambanana izay manampy ny masomboly, manohana ary manangana orinasa mpanombohana ihany koa. Eto eto Indianapolis dia hitantsika ny fahombiazan'ny iray amin'ireto - Faran'ny herinandro fanombohana.
Ny Bizspark dia tsy mampifandray ireo orinasa amin'ny vola, vokatra na mpiara-miombon'antoka fotsiny, fa miasa ihany koa mba hanampiana ireo orinasa ireo amin'ny fampiofanana sy ny filan'ny marketing koa. Midira dia hahita lisitry ny hetsika sy loharanon-karena mahavariana eo amin'ny faritra misy anao ianao hanampy anao amin'ny fananganana orinasa mahomby. Bizspark koa dia mampifandray ireo mpianatra amin'ny orinasa. Eritrereto izany… manomboka amin'ny mpianatra ka hatramin'ny fanombohana ka hatramin'ny orinasa kely dia omen'i Microsoft ny fanampiana ilain'izy ireo ny orinasa. Paikady izany!
Iray amin'ireo orinasa ireo LiquidSpace, fampiharana mahafinaritra izay natsangana tamin'ny Sehatra Windows Azure. LiquidSpace dia sady tranokala no fampiharana finday ahafahan'ny mpiasa finday mahita toerana iasana, na maimaim-poana izany, misy mandritra ny ora vitsivitsy, iray andro na mihoatra. Ny rindranasa finday dia azo alefa amin'ny toerana misy anao, mba hahafahanao manidina ao an-tanàna iray ary mipoitra toerana malalaka ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny orinasa sy ny tompona trano ara-barotra misy efitrano dia afaka mandefa ny fisian'izy ireo amin'ny LiquidSpace. Maimaimpoana raha malalaka ny habaka. Raha mitaky vola ny habaka dia mahazo isan-jaton'ny vola miditra ny LiquidSpace. Raha niresaka tamin'ny mpiara-manorina LiquidSpace sy COO Doug Marinaro izy ireo dia niditra tao amin'ny BizSpark ary nandray haingana ny sehatra Azure. Tao anatin'ny 6 herinandro ny famatsiam-bola, betaid ny LiquidSpace. Nilaza i Doug fa izany no vidiny ambany noho ny faktiora findainy.
LiquidSpace izao dia manana toerana voasoratra anarana maherin'ny 200, any California no ankamaroany. Ny orinasa dia manana mpiasa 20 miasa lavitra eo anelanelan'ny Minneapolis mankany Minsk miaraka amin'ny foibe any Palo Alto. Nilaza i Doug fa ny zavatra tsara indrindra momba ny sehatra sy ny fiaraha-miasa amin'i Microsoft dia ny fahafahany mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny orinasa fa tsy ny fanahiana momba ny haitao. Matoky izy fa hitombo miaraka amin'ny orinasa mandritra ny taona maro ny fahaizan'ilay sehatra Azure.
Misimisy kokoa ao amin'ny Microsoft Azure Platform:
Raha mitazona manokana ianao, latsaky ny telo taona, mahazo latsaky ny $ 1M US ary mamorona rindrambaiko… azonao atao misoratra anarana izao ho an'ny maha mpikambana BizSpark anao.
Manova ny orinasa ny takelaka
23 Okt 2011 amin'ny 11:04 PM